E bụ na video na ị nwere ya na kọmputa gị na ị chọrọ nwere ya na gị na obere ngwaọrụ dị ka iPhone. Iji nwere ya na gị na ekwentị gị mkpa nyefee ya na-eji ihe ngwa, nke bụ nchebe na ngwa ngwa. Ọzọkwa gị mkpa onye zuru n'ụzọ ga-anọgide na-adị gị ka mma videos. Ke ibuotikọ emi m ga-amalite site na-egosi gị otú nyefee vidiyo na kọmputa gị site na iji iTunes
Part1: Olee nyefee videos site na PC gị na-iPhone iji iTunes
Part2: Olee nyefee videos ka iphone enweghị adịkwa iphone videos
Nkebi nke 1: otú nyefee videos site na PC gị na-iPhone iji iTunes
ITunes bụ ngwa na-enye gị ohere jikwaa gị media n'ọbá akwụkwọ. Ọ na-enye gị ohere nyefee media si gị obere na ngwaọrụ dị iPhone, iPad, iPod gị Personal compute na Anglịkan. Gbaa mbọ hụ na kọmputa gị nwere iTunes tupu arụ ọ bụla ọrụ. N'okpuru ebe a bụ na usoro na otú nyefee vidiyo si na kọmputa na-iPhone.
Nzọụkwụ 1 Link Your iPhone ka PC
Gị iPhone ga-jikọọ kọmputa gị. Jikọọ ya a USB nke na-eweta gị iPhone. Ka ị na-efego ya na kọmputa gị iTunes ga spontaneously emeghe onwe ya. Ọ bụrụ na ọ ada ada ime otú aga Ngwa> iTunes na imeghe ya.
Nzọụkwụ 2 Họrọ vidiyo na iTunes na-agafere
Na gị iTunes window aga isi menu na pịa File. On dobe ala na Pop elu click on Tinye Files na Library. Ọ ga-eduzi gị na kọmputa ebe ị ga-họrọ videos ịkwaga iPhone na Tinye ka Library.
Nzọụkwụ 3 Nyefee họrọ videos ka iPhone
Ugbu a gaa iTunes na pịa gị iPhone bọtịnụ. Site n'ebe mmekọrịta gị videos na n'ikpeazụ pịa Mee na ala nke window. The videos ga-agafere gị iPhone enweghị ọtụtụ hassle.
Ihe mkpa ka ị maara banyere iTunes ngwa bụ na ọ ga na-ịnọchi anya ugbu a video faịlụ mgbe ị mekọrịta ya. Nke a na-abụkarị ikpe mgbe ị na-eji inbuilt ngwa ka ị nyefee videos gị mobile ngwaọrụ dị ka iPhone. Na nnukwu faịlụ na elu mkpebi ya mkpebi ga-belatara emecha adịkwa àgwà nke gị videos.
Mgbe ụfọdụ ị na-ahụ na ọ bụghị ndị niile videos e zigara gị iPhone iji windows. Ị nwere ike Agbaghara iji họrọ ha? Na-abụghị eziokwu. Ihe kpatara nke a bụ na iTunes adịghị akwado niile video formats. ITunes na obere ngwaọrụ akwado MOV faịlụ, M4V na MP4 videos format na nwekwara ike keere QuickTime. Hụ na ị na vidiyo na ị chọrọ nyefee ndị a usoro. Nke a ga-eduga a ịga nke ọma nyefe nke videos.
Iji zere ihe ize ndụ nke adịkwa ẹdude vidiyo na iPhone ma ọ bụ a video gwụsịrị-zigara gị iPhone. M nwere ike ikwu ị na-eji na-ekewaghị ekewa Wondershare ngwa akpọ Wondershare TunesGo Ochie.
Part 2: Olee nyefee videos ka iphone enweghị adịkwa iphone videos
A na ngwa hụrụ ma windows na Mac ọrụ ị dị nnọọ nwere ibudata site Wondershare ukara website. I nwekwara ike ịzụta ya na gburugburu $ 40. A na ngwa bụ uru ịzụta ebe ọ na-ahapụ gị nyefee gị media n'ọbá akwụkwọ ahụ bụ photos, music na vidiyo si gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa. Ọ bụ ngwa ngwa na nchebe. Dị ka ị nyefee faịlụ ọ ga-enwe ike iji tọghata kedi faịlụ ka dakọtara faịlụ na gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad. Na a ọnọdụ na i furu efu gị bara uru songs, ma ọ bụ vidiyo a na ngwa ga-enwe ike mbupụ ndị a dum item on iTunes ngwaọrụ gị. Olee ihe ndị ọzọ ụdị software ị na-ka na-achọ bụrụ na ọ bụghị Wondershare TunesGo Ochie? A ogbe nke faịlụ ga-agafere n'ime nkeji ole na ole. Abụghị ịtụnanya.
Enweghị ihe ọ bụla n'ihu ado ka m gosi gị otú iji nke a ngwa ka ị nyefee videos.
Nzọụkwụ 1 Download ngwa na ẹkedori ya na kọmputa gị
Ị pụrụ ọbụna download free ikpe hụ otú ọ na-arụ ọrụ. Gbaa mbọ hụ na ị wụnye ya n'ụzọ ziri ezi na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 Jikọọ gị mobile na kọmputa
Ị mkpa ejikọta na kọmputa na ngwaọrụ mkpanaaka na-ahapụ ikwu iPhone. Ọ ga-gbapụta na Wondershare TunesGo Ochie Ohere na n'aka ekpe nke window.
Nzọụkwụ 3 Họrọ Videos na-agafere
Ugbu a pịa na Movies, wee họrọ videos ị chọrọ nyefee gị na kọmputa. Wee pịa na Add sochiri Add nchekwa. Nke a ekwe ka unu chọta videos site na kọmputa gị iji tinye iPhone.
Nzọụkwụ 4 agafeta Videos ka iPhone
Mgbe e ji videos tinye gị na iPhone, ị nwere ike ugbu pịa Open. The videos ga-agafere ngwa ngwa gị iPhone.
Ọ dịghị mkpa na-aga nile Internet achọ ngwa nyefee gị videos gị iPad, iPod ma ọ bụ iPhone. Dị nnọọ download Wondershare TunesGo Ochie na-enwe ya ebube atụmatụ. Ọ bụ a n'uche-afụ na ngwa na-ị ga-enwe.
3 Easy Ụzọ Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Android ekwentị mkpanaaka na
> Resource> Nyefee> otú nyefee videos site na PC na-iPhone for free